Iimveliso ze-chiral-APICMO Abafaki be-CDMO
iimveliso > Izilwanyana zaseCraral
Ubuqhetseba yipropati yejometri yee-molecule nezinye ion. I-molecule ye-chiral / ion ayinakunqunyulwa kwi-mirror image. Ubuninzi beziko lekhabhoni lombonakalo lenye yezinto ezinxulumene nezixhobo ezinokwenza izilwanyana ezinobumba kunye nama-molecule.
Iziqulatho zabantu ngabanye zivame ukuba zikhethwe njengezandla ezisekunene okanye ezisekhohlo. Ubuqhetseba kubalulekile xa kuthethwa nge-stereochemistry kwi-chemistry kunye ne-chemistry. Le ngcamango ibaluleke kakhulu kuba i-biololecules ezininzi kunye neyeza ziyi-chiral.
Zininzi iamolekyu eziphilayo eziphilayo ziquka i-chiral, kubandakanywa i-amino acids ngokwemvelo (izakhiwo zeeprotheni) kunye noshukela. Kwiinkqubo zezinto eziphilayo, ininzi yale mihlanganisi ifana neyantlupheko efanayo: amaninzi ama-amino acids (i) kunye neeshukela ziyi-parxtrorotatory (d). Iiprotheni eziqhelekileyo ezenzeka ngokwemvelo zenziwe nge-l-amino acid kwaye ziyaziwa njengeiprotheni ezisekhohlo; i-d-amino acids efana ne-rarer ivelisa iiprotheni ezifanelekileyo.